မြန်မာနိုင်ငံကို တဖြည်းဖြည်းဖြန့်ကျက်လာတဲ့ Ooredoo 4G+ Network
မြန်မာနိုင်ငံကို တဖြည်းဖြည်းဖြန့်ကျက်လာတဲ့ Ooredoo 4G Plus Network
19 Feb 2018 . 4:46 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စမတ်ဖုန်းမိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေက အခုဆိုရင် ယခင်တုန်းက 3G Network ကိုပဲ ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာတော့ 4G Network တွေကို စတင်လာခဲ့တာ နှစ်အနည်းငယ်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ 4G Mobile Network ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Ooredoo Myanmar ကနေ အခုအချိန်မှာ သူရဲ့ နောက်ဆုံး 4G Plus Network ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့နယ်တွေအများအပြားမှာ ရရှိနိုင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ Ooredoo ရဲ့ 4G Plus Network ဟာဆိုရင် 4G Network ကို ပိုပြီး အဆင့်မြင့်ထားတာဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အတွက်လက်ရှိမှာ အမြန်ဆုံးအင်တာနက် Speed ရရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း Download Speed ကို 64Mbps နဲ့ အထက်ကို ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ooredoo Myanmar ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ အခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့နယ် ၂၀၀ ခန့်မှာ Ooredoo 4G Plus Network ကိုရရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အောင်မြင်မှုဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက Mobile Data ကို အသုံးပြုသူတွေအတွက် သိသိသာသာကို ကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ooredoo ရဲ့ အခုလိုမျိုး 4G Plus Network ရနေတဲ့ မြို့နယ် ၂၀၀ ထဲမှာ Akhayar ပရိသတ်ကြီးရော ရှိနေကြပါသလား?
မွမွနျမာနိုငျငံမှာ စမတျဖုနျးမိုဘိုငျးအျောပရတောတှကေ အခုဆိုရငျ ယခငျတုနျးက 3G Network ကိုပဲ ပေးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ အခုအခြိနျမှာတော့ 4G Network တှကေို စတငျလာခဲ့တာ နှဈအနညျးငယျရှိသှားပွီပဲဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ 4G Mobile Network ကို စတငျအသုံးပွုနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးတဲ့ Ooredoo Myanmar ကနေ အခုအခြိနျမှာ သူရဲ့ နောကျဆုံး 4G Plus Network ကို မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မွို့နယျတှအေမြားအပွားမှာ ရရှိနိုငျနပွေီလို့ သိရပါတယျ။ Ooredoo ရဲ့ 4G Plus Network ဟာဆိုရငျ 4G Network ကို ပိုပွီး အဆငျ့မွငျ့ထားတာဖွဈပွီး အငျတာနကျအတှကျလကျရှိမှာ အမွနျဆုံးအငျတာနကျ Speed ရရှိနတောဖွဈပွီးတော့ စမျးသပျကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာလညျး Download Speed ကို 64Mbps နဲ့ အထကျကို ရရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။
Ooredoo Myanmar ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ အခုအခြိနျမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မွို့နယျ ၂၀၀ ခနျ့မှာ Ooredoo 4G Plus Network ကိုရရှိနပွေီလို့ သိရပါတယျ။ အခုလိုမြိုး အောငျမွငျမှုဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ မွနျမာနိုငျငံက Mobile Data ကို အသုံးပွုသူတှအေတှကျ သိသိသာသာကို ကောငျးတဲ့သတငျးပဲဖွဈပါတယျ။
Ooredoo ရဲ့ အခုလိုမြိုး 4G Plus Network ရနတေဲ့ မွို့နယျ ၂၀၀ ထဲမှာ Akhayar ပရိသတျကွီးရော ရှိနကွေပါသလား?